FANAKORONTANANA FAMATSIANA HERINARATRA :: Misy minia mamotika ireo fotodrafitrasan’ny JIRAMA • AoRaha
FANAKORONTANANA FAMATSIANA HERINARATRA Misy minia mamotika ireo fotodrafitrasan’ny JIRAMA
Ahiana ho fana-
korontanana. Namoaka fanambarana ny avy eo anivon’ny orinasa Jiro sy rano Malagasy na Jirama, omaly, mahakasika ny ahiahy ho fisiana olona na andian’olona mamotika ireo fotodrafitrasa famatsiana herinaratra eto an-dreni- vohitra. Faritra stratejika maro no tapaka jiro, izay tsy antony avy amin’ny Jirama, ny alin’ny sabotsy lasa teo tokony tamin’ny 12 ora alina, toy ny teny amin’ny mano- didina ny fonjan’Antanimora. Araka ny fanambarana navoakan’ny Jirama dia “mila mailo sy mampandre avy hatrany ny tompon’andraikitry ny Jirama sy ny mpitandro ny filaminana raha toa ka mahita trangan-javatra mampiahiahy mahakasika ny fotodrafitrasa famatsiana herinaratra”.
Mbola nohamafisin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa Jirama ao amin’ny pejy “facebook”-ny fa “misy ireo izay mikendry hanakorontana ny saim-bahoaka sy ny fiarahamonina amin’ny alalan’ny fikitihana na fanimbana ireo fitaovana stratejika na tambajotra fitsinjarana herinaratra, ka miteraka fahatapahan-jiro na loza hafa tsy voafetra”.
Ahiana ho mety misy teknisiana ao amin’ny Jirama ihany miray tsikombakomba amin’ireo voalaza ho mpana- korontana ka minia manimba fitaovana sy foto-drafitrasa mba hanakorontanana saim-bahoaka. “Mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana amin’izao fotoana izao mahakasika io tranga izay tsy avy amin’ny orinasa Jirama io”, hoy ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny orinasa Jirama.
Araka ny fanambarana hatrany dia efa mandray ny andraikiny mahakasika io tranga io izy ireo ary mitohy ny fanarenana ny fotodrafitrasa mba hisorohana ny loza mety hitranga.
Efa misy ihany koa ny fepetra noraisina mba hisian’ny mpitandro ny filaminana miara- miasa amin’ireo mpiasa alina eo anivon’ny Jirama.
SEHATRY NY FITSABOANA :: Mpitsabo mpanampy an-jatony hokaramain’ny mpiara-miombon’antoka
FANOHANANA NY FITONDRAM-PANJAKANA :: Mitohy hatrany ny tan-tsoroky ny vondrona Eoropeanina